साहित्य | Ekhabaronline.com | Page 6
जीवनको रङ् (कविता)
-संघर्ष क्षेत्री खुप्पै खेल्न मन छ , रङहरुसँग ! उबेला विधवा नारीझैँ पन्छिएँ – रङहरु बाट टाढै भागेँ – उहीँ सेतो रङलाई नै इन्द्रेणी ठानेँ । सेतो , मात्र सेतो रङलाई ! सुर्यको सेतो रङनै भएपनि [पूरा पढ्नुहोस्]
लक्ष्मण अधिकारी ‘आमा जेल छुटिन् रे?’ खबर सुन्दा ‘घरमाथि पहिरो आयो’ भनेजस्तै भयो। १२ वर्षकी शिखरा र १० वर्षकी मन्दाराका त्रसित आँखा जुधे। पाँच वर्षको विछोडपछि आमा घर आउन लाग्दा खुसीले मन [पूरा पढ्नुहोस्]
आई हेट यू (कथा)
भानुभक्त ऊ यसरी हाँस्थी, मानौं संसारका सारा खुसी ल्याएर उसले उसको अञ्जुलीमा राखिदिएको छ। ‘कति बेस्सरी हाँसेको। सबै जना हामीलाई हेर्दैछन्’, ऊ साउती गर्थ्यो। ऊ मुख बिगार्थी र आँखा तर्दै [पूरा पढ्नुहोस्]